jeudi, 28 juin 2018 09:22
Kitra-Mondial 2018: Votsotra tanteraka teo ampelan-tanan’i Allemagne ny amboara
Vita hatreo ny Mondial 2018 ho an’i Allemagne. Resin’i Corée du Sud tamin’ny isa 2 noho 0 i Allemagne omaly alarobia 27 jona, faharesena in-droa misesy midika fa dia mangoron’entana. Tsy nahavita niaro ny anaram-boninahitra teo ampelan-tanany, amin’ny maha tompondaka erantany azy i Allemagne. (Jereo sary Tohiny)
Lalao roa, namono baolina dimy i Harry Kane. Hatreto dia ity kapitenin’i Angletera ity no mpampidi-baolina be indrindra amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 ity, taorian’ny andro roa nilalaovany hatreto. Nampidi-baolina efatra avy kosa hatreto i Romelu Lukaku (Belgique) sy Cristiano Ronaldo (Portugal). (Jereo Sary Tohiny)
Tsy mifarana akory ny lalao fifanintsanana isam-bondrona dia efa miisa 14 ireo “penalty” notsofin’ny mpitsara sy nodakaina tao anatin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 ity. 13 ny isan’ny “penalty” nandritra ny Mondial 2014 tany Brezila. Hatreto dia 18 ny isan’ny “penalty” be indrina nandritra ny Mondial, dia ny niseho tamin’ny 1990, 1998 ary 2002.
Ekipa telo hatreto no efa mazava fa tafita ho amin’ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra taorian’ny lalao roa vitany, amin’ny telo atrehiny amin’ny fifanintsanam-bondrona dia i Russie, l'Uruguay ary France. Efa naman’ny mangoron’entaka kosa, na mbola manana lalao iray avy hatrehina aza i Arabie Saoudite, Egypte, Maroc ary Pérou taorian’ny faharesena in-droa misesy azon’izy ireo avy tamin’ireo lalao roa vitany.
Sary Net : Aliou Cissé
41 taona, ilay mpanazatran’ny ekipam-pirenena Senegaley, Aliou Cissé no zandriolona indrindra amin’izy 32 lahy mpanazatran’ireo ekipa mifaninana amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, andiany faha-21 tanterahina any Rosia ity. I Óscar Tabárez izay mpanazatran’i Uruguay kosa no zokiolona indrindra amin’ity andiany ity, 70 taona ny lehilahy.
Fandresena indroa nisesy, 5 noho 0 nanoloana an’i Arabia Saodita sy 3 noho 1 nanoloana an’i Ejipta, no vokatra azon’i Rosia tamin’ny lalao roa natrehiny. Ampy hiakarany amin’ny dingan’ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra io. Fiadian-toerana laharana voalohany ao amin’ny vondrona A misy azy sisa ny lalao fahatelo hatrehiny izay hifandonany amin’i Uruguay. (Jereo Sary Tohiny)
Lalao roa, faharesena roa. Izay no vokatra azon’i Ejipta ao amin’ny vondrona A misy azy amin’izao Mondial izao. Resin’i Rosia mpampiantrano tamin’ny isa 3 noho 1 izy ireo androany. Tsy hanova na inona na inona ny lalao fahatelo hifanandrinan’i Ejipta amin’i Arabia Saodita. I Ejipta izany no ekipa voalohany hangoron’entana amin’ity Mondial ity. Rava teo ny nofinofin’i Mohamed Salah, mpilalao nandrandrain’ny Ejipsiana tokoa. Namono “penalty” izy androany tamin’ny fihaonany tamin’i Rosia, izay baolina tokana azon’i Ejipta.